ikhaya » iindaba » Iindaba ze-IBC: I-Fortium ibonisa iMediaSeal® iNew Security Anti-Ransomware I-Aspe
Iindaba ze-IBC: I-Fortium ibonisa iMediaSeal® iNew Security Anti-Ransomware I-Aspe
I-London - Fortium Technologies iya kubonisa izisombululo zayo zakutshanje zokukhusela imifanekiso yesikhalazo kunye nomxholo we-TV kunye nokweba, ukusabalalisa ngengozi kunye ne-ransomware kwi-tandem Aspera, inkampani ye-IBM, kwi-IBC 2017 kule nyanga e-Amsterdam.
I-Fortium ye-MediaSeal® ekuphumuleni kunye nokukhusela ukukhusela kuya kuboniswa njengento ehlanganisiweyo ye-Aspera yokudlulisa iifayile eziphambili kunye nentsebenziswano yesikhulumi. Ezibandakanyiweyo ziya kuba yinto entsha yokukhusela i-MediaSeal efumana kwaye ibingele i-ransomware kwi-encrypting content. Uboniso luya kubonisa indlela iMediaSeal igcina ngayo umxholo okhuselekileyo kuwo wonke umsebenzi wokuveliswa kwemveliso kwaye kungekhona ngexesha lokudluliselwa. Ingabonwa kwi-IBC kwi-standpera ye-Aspera iqabane, 7.G20.
"Ukwanda kwe-cybercrime kwandisa ukubaluleka kokusebenzisa ukhuseleko olongezelelweyo kulo lonke uhambo lokusebenza," kutsho i-Fortium Technologies CEO uMathew Gilliat-Smith. "I-MediaSeal kunye ne-anti-ransomware feature yayo iya kunika uxolo lweenkampani zengqondo zifuna ngokwenza i-encryption yenzeke ngokuzenzekelayo, ngokucacileyo kwaye ngokufanayo. Iifayile akufuneki zihlale kwifomu engabhalwanga kwi disk, kwi-transit okanye emva kokuthunyelwa. "
Isici esitsha sokuvimba i-ransomeware yeN MediaSeal senzelwe ukukhusela ngokuzenzekelayo iinkqubo ezingabonakaliyo ukuzama ukufumana ifayile okanye iifolda ezibukhali. I-MediaSeal iyakwazi ukucoca kunye neenkqubo zokulawula kwinqanaba lefayili ukwenzela ukuba iinkqubo ezingabonakaliyo kunye ne-spoofed zingabonwa kwaye zivinjiwe, zinike ulawulo olongezelelweyo olukhuselekileyo.
"Siyazi ukuba abathengi 'bakhathazeka ngokukhathazeka ngokugcina umxholo wemidiya ukhuselekile kuwo wonke umsebenzi wabo. Siyavuya kukuba i-Fortium ibonisa izicombululo ezidibanisa ukhuseleko lwenqulatho kunye ne-Aspera ye-intanethi ye-speed-delivery technology. "Utshilo uJohn Wastcoat oyiNtloko kaMongameli wezoPhuhliso kwiZoshishino Aspera, inkampani ye-IBM.
I-Aspera Faspex ™ inikeza ngendlela enembile, efanelekileyo kubantu ngabanye kunye namaqela ukuba asebenzisane kwaye atshintshe iifayile kunye neenkcukacha zazo naziphi na ubukhulu, ngaphezu kwanoma yimuphi umgama. I-Aspera iphula i-bottleneck yedatha enkulu-ngokusebenzisa i-platform ye-web elula, eguquguqukayo nezikhuselekileyo zokubambisana kunye nokunikezelwa kwefayile yomntu wonke. Ukusebenzisa i-Faspex, abambisene banokuthumela kalula, bafumane, kwaye babelane ngolwazi ukusuka naphi na kwihlabathi.
I-Fortium Technologies yinkonzo ehamba phambili yokhuseleko lokuqukethwe kwedijithali kumabonakude kunye nokuzonwabisa ngokubonelela ngobuchwepheshe obutsha obanika amashishini aphezulu ukulawula umxholo wabo wedijithali. I-encryption yefayile ye-MediaSeal ikhusela yonke iifayile zefayile kwi-Windows nakwi-Mac kwaye ingasetyenziselwa yonke imisebenzi ye-b2b. Iimveliso ze-Fortium nazo zikhusela i-Academy ne-BAFTA i-award-screeners ne-Patronus kunye no-Blu-Lock.
Ukuphakamisa i-Sun Pictures Ikhulisa i-Studios kunye nabasebenzi - Julayi 17, 2018
Khu seleko Fortium IBC Mveliso entsha Izicelo zomkhiqizo SoftAtHome, MStar, iCES2017 I ntengiso ITeknoloji yeTV	2017-09-13
Previous: UKen Truong obizwa ngokuba nguMongameli we-FOR-A Corporation yaseMelika
next: I-Adorama ibonisa "i-Adorama Business Solutions"
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "IBC News: Fortium ibonisa iMediaSeal® iNew Security Anti-Ransomware I-Aspera". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/ibc-news-fortium-shows-mediaseal-new-security-an-ransomware-feature-with-aspera/. Enkosi.